IBUDATA MBIPỤTA ỌHỤRỤ NKE DIA - MMEMME NYOCHA - 2019
Dia bụ usoro n'efu nke na-enye gị ohere ịmepụta eserese dị iche iche na streamload. N'ihi ike ya, a na-ewere ya na ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ya. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ na mahadum na-eji nchịkọta akụkọ a iji zụọ ụmụ akwụkwọ.
Nnukwu nhọrọ nke ụdị
Na mgbakwunye na ihe ndị a na-eji eme ihe n'ọtụtụ algorithmic flowcharts, usoro ihe a na-enye ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ntinye ọzọ maka ederede n'ọdịnihu. Maka onye ọrụ dị mma, ha na-esonye na ngalaba: igbochi eserese, UML, ihe dịgasị iche iche, sistemụ wiring, logic, chemistry, netwọk kọmputa, na ihe ndị ọzọ.
Ya mere, usoro ihe omume ahụ adabara ọ bụghị naanị maka mmemme mmemme, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iwu ụlọ ọ bụla site na ụdị akwụkwọ ahụ.
Hụkwa: Ịmepụta chaatị na PowerPoint
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ eserese ọ bụla, a ghaghị ijikọta ihe ndị dị na ya. Ndị editọ editọ nwere ike ime nke a n'ụzọ ise:
Bezier ọsọ. (5)
Na mgbakwunye na ụdị njikọ, usoro ihe omume ahụ nwere ike itinye ụdị nke akụ ahụ, akara ya na, ya mere, njedebe ya. Nhọrọ nke oke na agba dịkwa.
Tinye ụdị ma ọ bụ onyinyo gị
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ enweghị ụlọ akwụkwọ ọhụụ zuru ezu nke usoro ihe omume ahụ nyere ma ọ bụ nanị ịchọrọ ịgbakwunye foto na foto ya, ọ nwere ike ịgbakwunye ihe dị mkpa na-arụ ọrụ na bọtịnụ ole na ole.
Mbupụ ma bipụta
Dịka ọ bụla na-edepụta ihe ngosi ihe osise, Dia na-enye ike ịkwalite ọrụ okirikiri na faịlụ achọrọ. Ebe ọ bụ na ndepụta ikikere enyere maka mbupụ dị nnọọ ogologo, onye ọrụ ọ bụla ga-enwe ike ịhọrọ onye ọ bụla n'otu n'otu maka onwe ya.
Hụkwa: Gbanwee ndọtị faịlụ na Windows 10
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye ọrụ nwere ike mepee osisi zuru ezu nke ederede ihe omimi nke etinye ihe niile etinye na ya.
N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ọnọdụ nke ihe ọ bụla, ihe ndị o nwere, ma zoo ya na atụmatụ izugbe.
Njirimara Atiya Editor
Maka ịrụ ọrụ dị mma na nchịkọta Dia, ị nwere ike ịmepụta onwe gị ma ọ bụ dezie ụdị ihe a dị ugbu a. N'ebe a, ị nwere ike ịmegharị ihe ọ bụla n'etiti ngalaba, tinyekwara nke ọhụrụ.
Iji mee ka ndị ọrụ dị elu dịkwuo ike, ndị mmepe agbakwunyere nkwado maka mgbakwunye ndị ọzọ na-emeghe ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ na Dia.
Modul na-amụba ọnụ ọgụgụ nke ndọtị maka mbupụ, tinye ihe ọhụrụ nke ihe na ụdị eserese dị njikere, ma tinyekwa usoro ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ "Postscript Drawing".
Ihe Ọmụmụ: Ịmepụta mgbatị na MS Okwu
Onu ogugu nke ihe;
Nhazi nkwekọrịta dị elu;
Ikike ị gbakwunye ihe nke gị na edemede;
Ọtụtụ ndọtị maka mbupụ;
Nchịkọta na-aga n'ihu, nke dị ọbụna ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ;
Nkwado ụzụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye mmepụta.
Iji rụọ ọrụ, ị ghaghị itinyeworị GTK + Runtime Environment.
Ya mere, dia bụ onye editọ free na nke bara uru nke na-enye gị ohere ịmepụta, gbanwee ma bupụ ụdị ụdị ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-ala azụ n'etiti ọdịiche dị iche iche nke akụkụ a, ị kwesịrị ịṅa ntị na ya.
Download Dia maka n'efu
BreezeTree FlowBreeze Software AFCE Algorithm Flowchart Editor Blockchem Onye na-eme egwuregwu
Dia bụ mmemme maka ịrụ ọrụ na eserese dị iche iche, na-ahapụ ha ka ha wue, gbanwee ma bupụ ha.
Onye Mmepụta: Ndị Mmepe Di